Warka SAMSUNG: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis
Samsung waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan uguna muhiimsan Koonfurta Kuuriya, iyadoo laga helo adduunka oo dhan. Shirkadan ayaa caan ku ah soo saarida dhamaan noocyada wax soo saarka elektarooniga ah (telefishannada, xusuusta, kombiyuutarada ...) iyo sidoo kale kiniinno iyo taleefannada gacanta ee casriga ah oo ay la socdaan Android oo ah nidaamka qalliinka. Samsung hadda waa shirkadda taleefannada ugu iibsiga fiican adduunka.
Telefoonada Samsung waxaa lagu gartaa tayadooda, oo leh qeexitaano wanaagsan, naqshad wanaagsan iyo qiimayaal is bedbeddela. Qeybtaan waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho dhammaan wararka ku saabsan shirkadda iyo taleefankeeda. Dhamaan wararka, bilaabida iyo dib u eegista taleefanada shirkada Kuuriya.
Samsung Galaxy Z Flip 3 Si Wanaagsan: Naqshad Laablaab La Hagaajin Karo, Resistance Biyaha, Bandhigga 120Hz, iyo Inbadan
Samsung ayaa samaysay sarkaal cusub oo casri ah oo casri ah, waana Galaxy Z Flip 3, oo ah mobiil ...
Samsung waxay ku soo bandhigtay labadeeda calan ee Unpacked bishii Ogosto 11. Shirkadda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday ...
by Manuel Ramirez samee Bilaha 8 .
Iyada oo loo marayo Lock wanaagsan waxaan ku tusinaynaa cusbooneysiinta cusub ee One UI 3.0 ee mid ka mid ah ...
Mar haddii Xiaomi soo bandhigtay mowqifkeeda ku-laabashada taleefannada, waxaa naloo qasbay inaan isbarbardhigno ...
In kasta oo ay run tahay in taleefannada casriga ah badankood suuqa soo galeen sannadihii la soo dhaafay, ay iska caabiyaan ...
by Haaruun Rivas samee Bilaha 9 .
Galaxy A82 5G waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ku soo xiga Samsung. In badan ayaa lagu xamanayay arrintan ...
by Manuel Ramirez samee Bilaha 9 .
Ku dhowaad 10 sano, Samsung Galaxy SII Samsung wali wuu nool yahay oo si fiican ayuu ula socdaa dekedda ...
Hal caddeyn oo dheeri ah oo ah in Samsung ay bateriga u dhigtay cusbooneysiinta, waxaan ku haynaa wararka ...